Sida loo Fedora: Ku rakibida Fedora 17 DVD iyo LiveCD | Laga soo bilaabo Linux
Sida loo Fedora: Ku rakibidda Fedora 17 DVD iyo LiveCD
Perseus | | Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Arrintan Sida loo Waxaan ku bari doonaa sida loo rakibo Fedora DVD, maaddaama oo aad leedahay xulashooyin badan oo qaabeyn ah, waxay ku noqon kartaa jahwareer isticmaalaha.
Farqiga u dhexeeya Fedora LiveCD iyo Fedora DVD
Waxaan fursad u leenahay inaan doorano barnaamijyada iyo goobaha desktop-ka ee aan dooneyno inaan rakibno.Degmooyinka desktop-ka waa: Gnome Shell, KDE, XFCE, LXDE, Sugar, iyo kuwo kale.
Ujeeddadeedu waa rakibidda (maahan LiveDVD).
Cabbirka DVD-gu waa 3.7 iyo 3.6 Gb iyadoo kuxiran dhismaha (i386 ama x86_64).
Jawiga caadiga ah ee desktop waa Gnome Shell. Haddii aad rabto inaad isku daydo deegaan kale oo desktop ah, waa inaad doorataa xiriiriyaha u dhigma.
Cabirka LiveCD wuu kayaryahay 700 Mb wuxuuna taageeraa naqshadaha i686 iyo x86_64.
Ma dooran karno codsiyada lagu rakibayo nidaamkeena, laakiin waxay ficil ahaan u qabataa rakibidda ugu yar.
Xusuusin 1: Uma laha taageero buuxda luuqada Isbaanishka, si loo gaaro tan aqriso gelitaanka soo socda: Sida loo Fedora: Daaweynta nidaamkayaga (locale).
Xusuusin 2: Shaashadda shaashadda qaarkood ma soo muuqan doonaan inta lagu jiro rakibidda, laakiin nidaamka lagu sharaxay waa isku mid;).
Ku rakibidda Fedora
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno waa inaan kala soo baxno sawirka ISO midkood bogga rasmiga ah, muraayadda ama durdurka. Marka aan haysano ISO-da kumbuyuutarkayaga, waxaan usii socon doonnaa inaan ku gubeyno sawirka la yiri CD, DVD ama haddii aad doorbido, waxaad abuuri kartaa pendrive bootable ah.
Tallaabada xigta waxay noqoneysaa in la hagaajiyo BIOS-ka kombuyuutarkeena si aan toos uga bilowno dhexdhexaadinta aan dooranay. Marka xigta waxaan soo bandhigeynaa qalabka oo waxaan bilaabaynaa qalabka.
Sawirka koowaad ee soo bixi doona waa kuwan soo socda:
Sida aad u jeeddo, waxaan haysannaa laba ikhtiyaar, oo aan si kooban u sharraxayo:
Ku rakib ama cusbooneysii Fedora
Xulashadani waxay noo ogolaaneysaa inaan rakibno ama cusbooneysiino nooca Fedora (haddii horey loogu sii rakibay kombuyuutarkeena). Xulashadani waa mid waxtar leh haddii aan hubno in aan wax dhibaato ah kala kulmi doonin kaarka sawir gacmeedka marka aan rakibayno. Maxaan ugala jeedaa tan? Hagaag, kiiskeyga kumbuyuutarradeydu waxay leeyihiin kaararka Nvidia waqti ka waqtina waxaan dhib ku qabaa rakibida qaar ka mid ah (sida Fedora) iyada oo loo marayo garaafka garaafka, tusaale ahaan, shaashadda ayaa cakiran, waxaa loo qeybiyay dhowr qaybood qeybahaasna waxay umuuqdaan kuwo is dul saaran midbaa ka dambeeya. Sababtaas awgeed ama duruufaha la midka ah waxaa jira xulashada labaad ee liiska:
Xulashadani waa mid waxtar noo leh si aan uga takhalusno dhibaatada dhibta leh ee aan kor kuugu sheegay. Wax dhibaato ah ma jiraan haddii aad rabto inaad ku rakibto doorashadan, dabcan;).
Ka dib markii aad dooratay mid ka mid ah xulashooyinka 2, nidaamku wuxuu ina tusi doonaa saaxir rakibaadda :). Su’aasha ugu horreysa ee aan ka jawaabi doonno waxay noqon doontaa: luqadda. Xulashadani waa muhiim, maadaama nidaamkeena loo qaabeyn doono iyadoo kuxiran luuqada aad dooratay.
Halkan waxaan ku xushay qaabka khariidadeena si aan ugu haboono macaamilka: P, qaababka ugu caansan ee loogu hadlo dadka Isbaanishka ku hadla waa kuwa soo socda: Isbaanishka iyo Laatiin Ameerika.
Shaashadda xigta ayaa na weydiineysa nooca qalabka ama qalabka aan ku xirnay kombuyuutarkeena. Caadi ahaan ikhtiyaarka koowaad ayaa ku filan ku dhowaad dhammaan qalabka, ikhtiyaarka labaad ayaa ah in la hagaajiyo ama la dhiso qaabeyn takhasus leh.
Waxaan soo bandhigeynaa magaca aan ku aqoonsan doonno qalabkeena shabakadda dhexdeeda.
Waxaan doorannaa waddankeenna iyo aaggeenna waqtiga. Qeybta hoose waxaan ka heli karnaa ikhtiyaarka aan ku adeegsan karno UTC (isku-duwidda waqtiga caalamiga ah) ama maya, haddii aad haysato nidaam kale oo aad ku shaqeyneyso kumbuyuutarkaaga (tusaale ahaan: Windows), waxaa ugu wanaagsan inaadan dooran xulashadan.
Waa inaan u qornaa eray sir ah maamulaha ama koontada xididka. Talada hore waa in la adeegsado eray sir ah oo ka weyn 8 xaraf oo ay ku jiraan: xarfaha, lambarrada iyo calaamadaha xarakaynta si aad uga dhigto mid sugan sida ugu macquulsan, waad go'aansatay;).
Haddii aad iska indhatirtay soo jeedintaydii hore, waxay ku weydiin doontaa inaad xaqiijiso haddii aad rabto inaad sii wadato adeegsiga ereyga sirta ah ee daciifka ah, haddii ay sidaas tahay, xulo ikhtiyaarka: Sikastaba isticmaal, haddii kale riix Cancel oo aad saxdo socodkaaga XD.
Waxaan u nimid qaybta ugu muhiimsan uguna jilicsan ee rakibida, halkan waxaan kaa codsan lahaa inaad fiiro gaar ah u yeelatid talaabo kasta oo aad qaaddo, maxaa yeelay hadaan go'aan xun qaadano oo aan dhaqan galino isbadalada, waxaan halis u nahay inaan lumino macluumaadka ku keydsan darawalkeena adag TT.
Sida aad u aragto, waxaan haysannaa 5 xulasho, oo aan ku sifeynayo:
Isticmaal dhammaan booska.
Masax dhamaan diskiga oo rakib Fedora. Xulashadani waa mid waxtar leh haddii aan rabno inaan ku haysano kaliya 1 nidaamka qalliinka diskigeenna.
Beddel nidaamyada Linux jira.
Xaaladda ah inay jiraan qaybo ku jira nidaamyada GNU / Linux, waxaa lagu beddeli doonaa Fedora.
Hoos u dhig nidaamka hadda jira.
Xulashadani waxay kuu oggolaaneysaa inaad wax ka beddesho cabbirka qaybta Fedora ama nidaamka GNU / Linux.
Isticmaal meel bannaan.
Haddii aad boos bannaan ku haysato darawalkaaga adag, waxaa loo isticmaali doonaa in lagu rakibo Fedora. Waa loo beddeli karaa sida aad jeceshahay.
Abuur naqshad caado ah.
Doorashadani waxay noo ogolaaneysaa inaan ku abuurno qormooyinkeena gacanta. Haddii aadan haysanin diskigaaga oo kaydsan, ama aad hayso xog aadan rabin inaad masaxdo oo aad khibrad u leedahay HA SAMEYN. Doorashadan ayaa waxtar u leh isticmaaleyaasha horeyba khibradda ugu lahaa rakibidda GNU / Linux. Shakhsiyan, marwalba waan istcimaalaa, maadaama ay ii ogolaato inaan xakameeyo waxa aan sameeyo ama doonayo inaan sameeyo.
Maaddaama ay jiraan siyaabo badan oo loo kala qaybiyo oo loogu rakibo Fedora kombuyuutarradeena iyo sababta oo ah uma jeedin in aan dheereeyo waqti aad u dheer, waxaan ku tusi doonaa sida loogu isticmaalo ikhtiyaarkan ugu dambeeya kombuyuutarkayga.
Hagaag, waxa ugu horeeya ee la sameeyo ayaa ah xulashada darawalkeena adag. Xaaladdan xajmigeedu waa 25 Gb, markii la doorto waxaan riixnaa badhanka Abuuri. Sanduuqa wadahadalka ee ka muuqda shaashadda ayaa furmaya waana dooranaynaa Qeybinta Heerka waanan gujinay Abuur.
Sanduuqa wadahadalka soo socda waxaan ku xulaneynaa xulashooyinka soo socda:
Buurta dhibic: / (galka xididka).
Nooca nidaamka faylka: ext4 (waa ikhtiyaarka ugu badan ee lagugula taliyay, laakiin waxaad ku dooran kartaa hadba doorbidkaaga).
Cabirka (ku jira) MB: 15000 (qiyaastii 15 Gb. Waxaa lagugula talinayaa inaad 10 Gb siiso qaybta xididka, laakiin sida caadiga ah waxaan jecelahay inaan ku siiyo 15 Gb hab ka hortag ah, khibradayda, xaddiga ugu badan ee booska lagu haysto xididka buugga qaar ka mid ah qaybinta Linux wuxuu ahaa 8 illaa 9 Gb, weligey ma awoodin inaan gaaro 10 barnaamijyo badan oo aan rakibay XD).
Waan sii wadeynaa, waxaan dooranaynaa booska wali harsan oo mar labaad riix badhanka Abuuri.
Buurta dhibcaha: / guriga (galka halkaasoo macluumaadka kuwa isticmaala nidaamka ku badbaadi doonaan).
Cabbirka (gudaha) MB: Tani waa ikhtiyaarkaaga iyadoo kuxiran sababaha soosocda: Meesha diskiga ah ee la heli karo iyo booska loo baahan yahay ee qeybta isdhaafsiga (xasuusta isku bedelka).
Marka la eego is-weydaarsiga, iyo in la filayo tallaabada xigta xoogaa, waxaa jira sharci guud (waxaan leeyahay caadi maxaa yeelay taasi maahan "Waxaa lagu xardhay xarfaha dahabka", cabirka qaybtan waxaa loo xisaabiyaa sida soo socota: waxaan had iyo jeer isku dayi doonaa inaanu u qoondeeyo kala bar tirada la heli karo ee RAM ee kumbuyuutarradeena, tusaale ahaan: haddii aan haysanno 4 Gb oo RAM ah, waxaa lagugula talin lahaa in loo qoondeeyo isku beddelashada 1.5 illaa 2 Gb.
Marka annagoo kaashaneyna xisaabta waxaan heleynaa cabirka qeybteena / guriga 😛
Ugu dambayntii (ugu dambayntii XD), waxaan xulannaa booska haray oo badhanka mar labaad ayaan mar kale riixnaa Abuuri:
Buurta dhibic: midna (waxba ma xusho)
Nooca faylasha: isku beddel (xasuusta isku beddel)
Cabbirka (gudaha) MB: cabirka la rabo (kiiskan, inta soo hartay)
Marka qaybinta diskiga la dhammeeyo iyo haddii wax waliba ku dhegaan rabitaankaaga XD, waan riixnaa Next (haddii kale, way riixi karaan Dib u Bilow inaad sameyso sixitaanka lagama maarmaanka ah ka hor intaadan sii wadin qaabeynta diskiga, waqtigaaga qaado, kuma deg degeyno, okay?).
Keydso isbeddelada diskiga.
Waxaan riixnaa badhanka Qaab.
Waxay ina tusi doontaa horumarka qaabaynta qaybaha qormooyinkeenna diskiga ah.
Waxay na weydiin doontaa haddii aan rabno inaan ku rakibno bootloader-ka (GRUB) darawalkayaga adag (sida caadiga ah) ama qalab kale (sida pendrive). Waan riixnaa Next.
Waqtigan xaadirka ah waxay na weydiin doontaa nooca software ee aan dooneyno inaan ku rakibno kombiyuutarkeena. Xaaladdan oo kale waxaan dooneynaa inaad rakibtid a "Miiska sawirada" oo waxaan adeegsan doonnaa keydadkii ugu dambeeyay, laakiin xagga hoose waxaan ku leenahay ikhtiyaar aad u xiiso badan, maaddaama ay tahay halkaan aan ku habeyn karno codsiyada lagu rakibayo 100%.
Hadaan xulano ikhtiyaarka Habee hadhow (dib u habeyn ka dib), waxaan ku rakibi doonaa Gnome Shell oo leh barnaamijyadeeda badankood. Haddii aan dooneyno inaan ku rakibno jawi kale desktop ama aan ku beddelo codsi mid kale, waa inaan doorannaa ikhtiyaarka Habee hadda (hadda astaysto), markaad sidan samaynayso, shaashadda soo socota ayaa soo muuqan doonta:
Qaybtaan waxaan ku sameyn karnaa isbeddelada aan u aragno inay lagama maarmaanka u yihiin. Waxaan ku dhex socon karnaa qaybaha (laga helay dhinaca bidix ee shaashadda) oo aan dooran karno ama ka saari karno qaybaha aan ka heli doonno kombuyuutarkayaga dhammaadka rakibaadda. Marka isbeddelada la sameeyo, waxaan riixnaa Next.
Nidaamkani wuxuu qaadan doonaa xoogaa waqti ah, marka kani waa wakhti fiican oo la cabo kafee ama sigaar si loo dabciyo neerfahaaga 'XD'.
Ugu dambeyntii, hawsha rakibida ayaa dhammaatay: D, waan riixnaa reboot (dib u bilaw) oo ha ilaawin inaad ka saarto CD-ga, DVD-ga ama pendrive kombiyuutarkaaga;).
Marka aan dib u kicino, waxaan arki doonaa muuqaalkan GRUB, sidee u qabow yahay, sax?
Bilaabida nidaamka nidaamka.
Nabadgelyo bootsplahs jir xun: D.
Hagaag, waxa inala gudboon inaynu hadda samayno ayaa ah inaynu ku hagaajino koontadayada isticmaale, waan riixnaa Adelante.
Waxay na tusaysaa macluumaadka liisanka, waan sii wadeynaa.
Waxaan galnaa xogta akoonkeena. Isla talobixin ku saabsan lambarkayaga sirta ah: in ka badan 8 xarfood, xarfaha, lambarrada iyo calaamadaha xarakaynta;). Qodob muhiim ah ayaa ah in la doorto ikhtiyaarka: Ku dar kooxda maamulayaasha, haddii aad rabto inaad adeegsan karto amarka caadiga ah sudo ka mid ah faa'iidooyinka kale;). Waan sii wadaynaa.
Waxaan xaqiijinaynaa in taariikhda iyo waqtiga si sax ah loo qaabeeyey.
Ugu dambeyntiina, waxay si kalgacal leh nooga codsanayaan inaan u dirno muuqaalka qalabka qalabkeenna. Tani waa si gacan looga geysto horumarinta Fedora, aan wanaagsanaano oo aan taageerno mashruucan adoo u diraya astaantayada, ha ka welwelin, in dirista si qarsoodi ah loo sameyn doono;)
Waan ku guuleysanay :), hadda waa inaan kaliya dib uga bilownaa rakibaadda, qaabeynta ... NAH XD, waa inaan ku raaxeysanaa Fedora kumbuyuutarradeena: D.
Haddii aad rabto inaad ogaato sida loo hagaajiyo hagaajinta qaybintaada, isticmaal mashiinka raadinta barta adoo adeegsanaya shuruudaha: Sida loo Fedora: : D.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Sida loo Fedora: Ku rakibidda Fedora 17 DVD iyo LiveCD
84 faallooyin, ka tag taada
2gb isku bedelku wuxuu iila muuqdaa mid xad dhaaf ah, waligay ma aanan siin wax ka badan 250 mb mana waligiin cabasho, dhanka kalena waa ka badan mb oo aad waxyaabo kale ka buuxin karto.
Laakiin kaalay tani waa mid shaqsiyeed.
Waxyaabo kale oo yar ayaa ah inaad samayn karto qayb saddexaad oo kali ah inaad kabaha ku dhufato, (Waxaan u maleynayaa in haddii ay ahaan lahayd qaansoor aan sii joogi lahaa ku xigeenka), laakiin waxaan horeyba u idhi waa waxyaabo aanan garanayn inay sax yihiin iyo in kale ….
Laakiin sharciga isku-beddelka ee aad tiraahdo: Ka tag nus ka mid ah xusuustaada wananka waxaan u maleynayaa laga bilaabo 2 gb oo wan weyn, muhiim maahan.
Aynu dhigno kiiska ah inaan haysto 32gb wan (haddii aan hore u ogaa inay bahal tahay, laakiin tusaale waxaan ka fekeri karaa kombuyuutar fiican for), sida ku cad aragtida hore waxaad siin lahayd 16gb, oo aadan adigu bixin xitaa kharashaad kuma bixin !!!
Marka aragtidii hore ee raamku waa uun taas ama ugu yaraan aniga ahaan !!!
Inta soo hartay, oo si aad u wanaagsan loo qoray loona sharaxay isticmaaleyaasha cusub ee khayaanadan cajiibka ah ee ay kafaala qaaday Koofiyad Cas, Sidee u xun tahay waxa la kafaala qaaday ...
Salaan Perseus, waxaan rajaynayaa inaadan khalad garanayn wixii aan kugula hadlay
Ha welwelin walaal, waad ku mahadsan tahay ka qayb qaadashada :). Iyo haa, laga yaabee inuu qaanuunka xad gudub yahay, taasi waa sababta ay u tahay talo soo jeedin, ka sokoow taas oo hadda leh meel aad u fara badan oo ku saabsan darawalka adag 500 GB ama ka badan, 2 GB ama dareemo XD.
Hadday 2 Gb xad dhaaf tahay, maxay ii sheegi doonaan haddii aan u oggolaado 10 Gb LOL Had iyo jeer waan u dhaafaa taas aagga sarrifka 😀
Waxaan isticmaalaa 2GB ... waxaana ku guuleystey inaan ku dhowaad 100% ka cuno SWAP-kayga hahaha
Sideed u cunaysaa wiil 2gb ah !!!
Intee in le'eg ayaad barnaamij ka dhigataa ????
Waxay ila tahay xad dhaaf aniga, malaha hadaan kde lahaa waan u baahnaan lahaa laakiin aan u tago aniga xagayga is dhaafsiga waxaa lagu raaxeystaa qeybtiisa Gb ???
Laakiin kaalay, haddii aad wada haysatid gb mansalva waad i siin kartaa !!!
HAHAHAHA si fiican haa ... 1.9GB ee SWAP-ga ah ayaa la cunay, iyo 900MBs oo RAM ah sidoo kale waa la cunay ... i rumee, 2 maalmood oo sidan oo kale ah waana inaan bilaabay inaan ka walwalo LOL !!!
XD, wax walba oo ku habboon isticmaalaha: D.
Su'aal ayaa dib ugu noqotay fedora, waxaan rakibaa waxkasta oo aan isticmaalayo KDE laakiin deegaanka waxaa lagu rakibay ingiriis laakiin qunsuliyada waxay kuqorantahay isbaanish waxaan ula jeedaa markaad cusbooneysiineyso waxaa kudhacdaa waa la soo dejiyey iyo intaas oo dhan laakiin deegaanku waa ingiriis dhan waxaan u socdaa luqado Xullo Isbaanishka waxay kuxirantahay repos yum, laakiin deegaanku wali wuxuu kujiraa Ingiriisi
Hubi haddii aad xirmada ku rakibtay:
Haddii aad horey u rakibtay, markaa wixii soo kordha waa in la qaabeeyo kde si loo beddelo luqadda nidaamka, si loo sameeyo, u aad doorbidista nidaamka, degmo ama maxalli ah halkaasna ku calaamadee luuqadda Isbaanishka, waxaad sameyn kartaa isbeddello badan haddii aad rabto. Marka tan la sameeyo, xiro fadhiga oo markale gal oo waa inaad horeyba ugu jirtay kde Isbaanish;).
Hagaag, fiiri waxay kugula talinayaan Fedora http://docs.fedoraproject.org/en-US/Fedora/17/html/Installation_Guide/s2-diskpartrecommend-x86.html
Qodobka aan sida aadka ah uga helo 256 ilaa 512 GB oo wan weyn, isdhaafsiga ugu yar ee 32Gb.
Waxaan u arkaa inay xad-dhaaf tahay isticmaalaha caadiga ah, wax kale oo halkan ku talinaya tan maxaa yeelay waxay ku dhaqaaqi doonaan wax-qabad, waxa aan idhi waxay u muuqataa inay u muuqato in lagula taliyo shirkadaha.
Mahadsanid saaxiib, laakiin dabcan ma noqon kartid, hambalyo baraha.
Si aad u wanaagsan ayaa loo sharaxay Perseus. Waxaan marwalba doorbidaa inaan wax ka rakibo DVD-ka sidaa darteed maahan inaan waxyaabo ku soo daro shabakadda. Tilmaam aan doonayo inaan ku daro, haddii aad rakibayso Fedora oo leh KDE, ku samee Spin, oo aan ka ahayn DVD; sifiican ayey u shaqeysaa sidaas.
Ohhh, kamaan aqoon KDE-ga. Mahadsanid walaal;).
Waa sababta oo ah DVD-ga ayaa la socda KDE "cayriin"; taa badalkeedna Spin-ka ayaa la habeeyay oo loo habeeyay inuu ku socdo Fedora.
laakiin wareegga lxde si fiican uma socdo, wifi wuxuu dhacayaa labadii ilbidhiqsiba !!!
Iskuma dayin lxde.
Waxaan ahaan jiray isticmaale Fryer,… raali ahaw, waxaan ula jeeday Fedora. Waxaan ahaa mudo dheer hadana markaan arkay waxbadan waxaad kahadleyso waxay iga dhigtay inaan markale helo xDD
Waxaan u maleynayaa in isla waxaas oo kale kugu dhacayo, waxaad tahay xoogaa shimbiro shimbir ah oo xamaasad leh
Uguyaraan aniga ayey igu dhacdaa, waxaa jira waxyaabo aad u fiican oo layaqaano, laakiin shalay waxaan tijaabinayay buundada Linux, ma aqaano hadii qof ogyahay, Mr. Perseo hubaal 🙂
Waxaan rabaa inaan isku dayo ... sida Mageia, Sabayon iyo Chakra ... kaliya, ilaa iyo hada laptop-kaygu waa mid xasiloon oo ku shaqeynaya baaritaanka Debian, aniga lafteyda ayaa iska xakameynaya inaan joojiyo inaan ka ahaado distro ilaa distro, maxaa yeelay way iga dhigeysaa waqti luminta shaqada haha.
XD, waad ku mahadsan tahay bogaadin ...
Perseus ... looma baahna in la abuuro qayb / boot?
Waxaan fahansanahay in fedora 16 ay ahayd inaad sameyso qeyb loo yaqaan / BIOS (Si fiican uma xasuusto hadii sidan loo qoro) .. sheyga ayaa ah in la ogaado hadii noocyadan cusub in qeybtaas la abuuri lahaa iyo in kale?
wax kale oo yar .. bilowga casharka ma beddeli kartaa sawirkaas gantaallada pyrotechnic-ka ah?
In alla inta kalasaarka / boot loo baahan doono, kana dhigaya mid qasab ah, maya, laakiin waa lagu talinayaa. Marnaba uma baahnin inaan u qoondeeyo qayb / boot, sida qaybta / BIOS, ma haysto xogta, waan ka xumahay: P. Xaqiiqdii taasi waa habka aan sida caadiga ah ugu qaybiyo darawalkayga adag ee GNU / Linux.
Sida beddelka sawirka GDM, dabcan waad awoodi kartaa :).
ahh ok ok. Mar hore ayaan walwalsanaa ... Waxaan u maleynayay in qaybta / boot-ka ay muhiim tahay ... Waan fahamsanahay in xuubka uu ku keydsan yahay halkaas ... laakiin sida Ubuntu, qeybtaas waxay nabad ugu wada noolaan kartaa qaybta / qaybta
walaalkay ka xumahay arintaas oo aad kuu dhibaysa .. sidee u badali kartaa sawirka GDM?
ma in ubuntu 12.04 ayaa la mid ah tan aan haysto maadaama ay si toos ah u gogoshahay gidaarka waxaanan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii taasi la mid tahay fedora
qaybta / boot boot ayaa loo qoondeeyay in lagu kiciyo taas, laakiin xididku sidoo kale wuu kicin karaa (boot) nidaamkaaga 🙂
Iyagu waa manias, aakhirka waxaa jira kun siyaabood oo wax lagu sameeyo, xorriyadda waxay ka kooban tahay taas ...
Ubuntu waxay isticmaashaa LightDM Fedora (Gnome) waxay u isticmaashaa GDM maareeyaha kal-fadhiga, sidaas si la mid ah maahan kiiska;).
ahh laakiin markaa waligaa ma beddeli kartid sawirkaas gantaallada ah GMD? : /
Haddii sawirka asalka la beddeli karo;).
Waxaan qabaa su'aal xoogaa ka baxsan boostada ..
Waxaa laga yaabaa in KZKG ^ Gaara iyo ELAV <° LINUX ay noqon doonaan kuwa ugu horeeya ee ka jawaaba ..
Suurtagal ma tahay in lagu rakibo qorfe on Debian Testing and Sid? iyo sida loo sameeyo.
Waan ka warqabaa in lagu rakibi karo Fedora ... laakiin weligey ma weydiin haddii lagu rakibayo Debian sidoo kale ... gaar ahaan Sid
Waxay ila tahay in elav uu u isticmaalay ama u isticmaalay Debian Testing, uma maleynayo inay wax dhibaato ah ka jirto Sid. Sida loo sameeyo, wax fikrad ah: P, Weligay ma aanan isticmaalin (khilaafaadka shaqsiyadeed ee u dhexeeya aniga iyo Adeer Clem dartiis, haa Waan ogahay, Geesinimadu waa Ubuntu waxa aan u ahay LM XD), marka lagu daro ma haysto wax sawirro Debian ah oo kombiyuutarkayga ah: (.
ahhh ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh kaliya kaliya gnome3, gnome
Perseus iyo sidee ayaan ugu dhejin karaa qorfe fedora 17 .. aad ayaan ugu faraxsanahay wax walboo aad daabacday ee ku saabsan isku day fedora markale ^ _ ^ waana sababta aan u waydiiyo su'aalo badan si aanan dhibaato ula kulmin iyo hadii ay suurta gal tahay in halkaa lagu joogo fedora
Si fudud: (isha, tan waxaa loogu talagalay F-16)
yum rakib qorfe
Ra'yi: Ma garanayo sababta ay sidaas ugu jecel yihiin ... runta ayaa ah inay nuugayso (aniga ugu yaraan).
Haddii aan caddeeyo: Waa lagama maarmaan in la rakibo Gnome-Shell.
Mahadsanid !! .. sifiican laxiriirta su'aasha .. way fududahay in laga jawaabo
waa wax laqaban karo .. qofka wuxuu ku sameeyaa "barirta" waxa ugufiican isaga .. iyo waxkastoo ku dhici kara ..
Waxaan beddelaa astaamaha, waxaan ku daraa astaamaha, kordhinta, iwm.
Tusaale ahaan, in ka badan 7 maalmood kuma qaato deegaan ... Had iyo jeer waxaan ku noolahay kala-beddel u dhexeeya gnome qolof iyo qorfe ... si aanan u caajisin oo aan ugu dhicin jadwalka dhimashada ee hal hawl iyo hal keli ah deegaanka
Juan Carlos .. Ma aanan fahmin .. maxaa dhacay .. maxaad u adeegsan la’dahay Fedora? : AMA
sifiican, qorfe waa cudurdaar kaliya inaad dareentid aqoon oo aadan joojin isku dayga Fedora ^ _ ^ hehehe
«Juan Carlos .. Ma aanan fahmin .. maxaa dhacay .. maxaad u isticmaali weyday Fedora? : AMA ".
Maxaa yeelay waxaan go aansaday inaan ku rakibo U-12.04 laptop-kayga maxaa yeelay waa LTS, waana aaladaha aan aad u isticmaalo. Markuu F-17 soo baxo waxaan ku rakibayaa PC desktop-ka aan diyaarsaday sugitaankiisa. Marka la soo koobo, isku dayga in aan ku daaweeyo nooca cudurka ee 'Fedora' .... hahahaha
Tani ma ka jawaabaysaa su'aashaada? https://blog.desdelinux.net/how-to-fedora-instalar-cinnamon-como-alternativa-a-gnome-shell/
In kasta oo aan arko in saaxiibkeen Juan Carlos uu horeba innaga fishay jawaabta XDDD ...
@Juan Carlos Mahadsanid bro: D.
aad u fiican ..
fiiri waxa saaxiibkay igu dhacay uun ..
Ugu Fiican Fedora 17
wax fiican ayaad ka soo qaadan kartaa halkaa si aad ugu soo qortid halkaan 😀
«@Juan Carlos Thanks bro». Ma jirto sabab, dhaqankii hore ee Fedorian, haddii aan aqaanno maaddada aan caawiyo.
Iyo, mowduuca, ma runbaa in Facebook uu iibsanayo biraawsarka Opera?
Ma jirto sabab, dhaqankii hore ee Fedorian, haddii aan aqaanno maaddada aan caawiyo.
@Juan Carlos Runtii waan jeclahay fikirkaas bro: D. Waad ogtahay in <° FromLinux wixii caawimaad ah aad loo soo dhaweynayo;). Dhanka Opera, waxay ku bilaabatay sidii warar la isla dhexmarayo, laakiin waxay heshay xoog badan, qaarbaa xitaa xaqiijiyay warka sheegaya in Facebook ay wadahadalo kula jiraan iyaga. Xitaa waxaa jira hadal ah inay doonayaan inay soo saaraan fargeeto Android ah iyagoo gacan ka helaya injineerada hore ee Apple. Anigu shaqsiyan ma jecli mid ka mid ah wararkaas xanta ah :(.
Wow, maqaal weyn oo ku saabsan xiriirka, waxaan ku dari doonaa qoraalkayga Fedora 17 ayaa si rasmi ah loogu sii daayay tixraac ahaan, ma laha qashin.
Mahadsanid bro :).
john Yuusuf dijo
Si daacadnimo ah uma aanan shaqeyn fedora ... Waxaan rabay inaan isku dayo tan iyo markii ay dhahaan waa wax aad u wanaagsan ma garanayo waxa ... laakiin waxaan ku rakibay livecd kaamil ah markii ay bilaabanto shaashaduna waa wax cad oo kale
Jawaab Juan Jose
kumuu soo dirayno wax qalad ah ama wax ina siin kara tilmaan? Si sax ah ma u rakibtay sagxadda?
Waxaan ku rakibaa wax kasta oo caadi ah ... Xitaa waxaan ku dhejiyay netbook si isku mid ah waana ku socday: S
kumbuyuutarkeyga kumbuyuutarka oo ku yaal amd 955 oo leh 4gb iyo radeon 6870
Waa hagaag, waxa aan ka dheehan karo tani waa inay macquul tahay kaarkaaga sawirada ee dhibaatada keenaya, haddii aad ku sii ballaarin karto macluumaadka qaar ka mid ah screnshot, iwm, waan ku qanacsanahay, waxaan u idhaahdaa si aan loo indho la ' : P.
Waa wax lala yaabo sida live-ka cd uu u cayilay, midda ku xigta waxay ugu yaraan noqon doontaa 1gb wan oo wan ah ???
Maan fahmin, waa maxay xiriirka ka dhexeeya cabirka LiveCD iyo cabbirka RAM?
Shaqo wacan, Perseus, waxaad igu dhiirrigelisay inaan isku dayo Fedora ... Debian ahaan wanaagsan waxaan jeclahay inaan jilicsado oo wax barto. 😉
Abuuritaanka dalool iyada ku xigta gacalisadayda Debian, in kasta oo aan dhibaato ku qabay ka dib markii la rakibey ay u badan tahay "ka maqnaan" hawsha rakibaadda ee la fuliyay qaybtayda, si aan u arko haddii aad talo i siin karto si aan u xalliyo dhibaatada. Aqoonsiga sheyga 'distro' ee asalka markii hore lagu rakibay Debian iyada oo aan la burburin asalka asalka ah.
Markaad gaarto tallaabada: «Waxay na weydiin doontaa haddii aan rabno inaan ku rakibno bootloader-ka (GRUB) darawalkayaga adag (sida caadiga ah) ama qalab kale (sida pendrive) Waxaan riixeynaa Next. » Hagaag, waxaan calaameeyay sanduuqa hubinta "rakib bootloader on / dev / sda". Ma aanan dooneynin inaan dib u qoro cadeynteyda asalka ah, anigoo ka fikiraya inaan mar dambe ka cusbooneysiiyo terminaalka ku yaal Debian cusbooneysiin-cusbooneysiin, laakiin rakibaadda Fedora ee dhowaan ima aqoonsaneyn.
Talo bixin kasta? Aad baad u mahadsantahay!
Ku jawaab Seregik
Ka waran bro, ka raali noqo dib u dhaca;). Maxaad u rakibeysaa xirmada:
sidaa darteed marka la abuurayo qaabeynta gunta cusub waxay ogaan kartaa jiritaanka nidaamyada kale ee hawlgalka :).
Salaan iyo mahadsanid faallooyinkaaga: D.
Waad salaaman tahay, maxaan sameyn karaa haddii luuqadda rakibidu aysan iiga dhicin? waxay kaliya ii direysaa shaashadda luqadda kumbuyuutarka la xusho. Ma doonayo in nidaamkaygu ku ahaado Ingiriis, qof ayaa i caawiya
Ku jawaab ronald
Sidee tahay ronald, raali ahow dib u dhaca;). Ma hubo haddii ay cillad ku jirto rakibayaasha Fedora anaconda, laakiin sidaad u sheegtay ma muujineyso xulashada luuqadda lagu doorto. Waad sameyn kartaa waxyaabaha soo socda, rakibi Fedora ka dibna ka beddel dejinta luqadda deegaankaaga desktop, haddii aad u baahan tahay caawimaad, weydii, maadaama aanan si sax ah u aqoon deegaanka aad rabto inaad rakibto (KDE, Gnome, XFCE, LXDE, iwm) , si aan kuugu sheego wax badan ama ka yar nidaamka la raacayo
Qoraalkani wuxuu sidoo kale kaa caawin karaa qayb ahaan:https://blog.desdelinux.net/how-to-fedora-espanolizando-nuestro-sistema-locale/
Haa, waan helay xalka! mahadsanid 🙂
Hadda waxaan dhibaato kale ku qabaa qoruhu
Kani waa nidaamkeyga hadda jira. Abuur qayb ka mid ah meel aan la qoondeyn karin si aad Fedora halkaas u dhigto. Sidii aan horeyba ula sameeyay Ubuntu 11.10.
Waa hagaag ujeedku waa in markaan isku dayo inaan isticmaalo 'isticmaal boos bilaash ah' ama 'abuuro qaabeyn qaabeed' ikhtiyaariyada ayaan helayaa khaladka "ma qoondeyn karo qaybo la codsaday - ma ahan meel ku filan oo firaaqo ah"
Waxyaabaha layaabka leh ayaa ah in Ubuntu aysan waligood dhibaato igu tuurin, hada F17 oo aan isku dayo inaan rakibo waa dhib: haa hadaan furey Ubuntu maxaa yeelay waxay ku qaldaneyd taageereha iyo isticmaalka korontada ee Lenovo, taas oo jidka lagu dilo Batarigeyga iyo hada Waxay socotaa 1h ugu badnaan -_-
Waxaan rajeynayaa inaad iga caawineyso welwelkaan, runtii waan jeclaa tijaabinta Linux mana doonayo inaan ka tago gabi ahaanba.
Waa hagaag, wixii aan ka fahmay, rakibayaashu waxay kuu sheegayaan inaadan haysan meel bannaan oo bilaash ah oo aad ku rakibto qalabka 'distro', tani maahan kiiska maadaama aad leedahay qayb qayb ka mid ah halka laga qabanayo, waxa aad sameyn lahayd ayaa tilmaamaya halka aad rabto inay ahaato rakibay habka soo socda:
Waxaad u bilaabeysaa rakibayaha si caadi ah markii ay ku weydiiso nooca rakibaadda, xulo: Abuur qaab-dejin u gaar ah. Waxaad arki doontaa sawir la mid ah kan laga helay booska toban (tirinta kor ilaa hoose) ee boostada, haddii aad hesho, sax?
Markaas waxaad doorataa xijaab Meel aan la deginMarkaa ma lumineysid, waxaa kugu hagi kara cabirka qeybta, oo qiyaastii ah 176,097 MB.
Waxaad gujineysaa ikhtiyaarka Isbedel Sawir la mid ah sawirka 11 ayaa soo muuqan doona, raac nidaamka oo ku sii soco sawirka 12.
Waxaad gashaa xulashooyinka:
Barta buurta: /
Nooca faylasha: ext4
Cabbirka Mb: xaddiga ku tusaya cabirka qayb ahaan la sheegay.
Waad siisaa OK, si aad ugu noqoto shaashadii hore. Horeba shaashaddan ayaad riixaysaa Next sii wadida rakibida;). Nota: Haddii uu ku weydiiyo haddii aad rabto inaad sii wadato adigoon meel u oggolaanaynin isku-beddelka, waxaad dhahdaa haa.
Tani waxay noqonaysaa habka ugu fudud uguna fudud ee lagu rakibo Fedora, oo ku habboon tijaabinta oo keliya, laguguma talin wax soo-saarka: (, haddii aad rabto rakibo khaas ah oo dheeri ah, waxaad u baahan tahay inaad ka dhigto qaybta madhan firfircoon la kordhiyay, hadaadan horey u laheyn, si hadhow aad ugu kala qeybin karto isla qaybintaan (u qalanta dib u dhigista: P) 3 ama 4 qaybood oo lagu daray mid loogu talagalay / (xididka), / guriga, / isdhaafsiga iyo / boot. Haddii aad rabto inaad tan ku hagto, ii soo sheeg :).
Maan fahmin, waa maxay xiriirka ka dhexeeya cabirka LiveCD iyo cabirka RAM? [/ Quote]
Fudud, haddii aan soo dejino tooska si aan u rakibno tusaale ahaan xfce ama lxde, waxay ku weydiineysaa 700 iyo Mb dheer oo wan, haddii aan haysano 256 ma awoodi karno.
Waxaan u arkaa qaladkan, sababtoo ah way fiicantahay in gnome ama kde aad ubaahantahay 1gb wan (marka la eego, websaydhku wuxuu dhigayaa shuruudaha ugu yar 1GB RAM), laakiin xfce ama lxde waxay umuuqataa xad dhaaf ...
Ma ahan kiiskeyga tan iyo markii aan haysto laptop 1gb wan ah, laakiin waxaan u maleynayaa in miiska fudud uu leeyahay iftiin cd distro nool
PS: Waxaan tan ku tijaabiyay wareegga lxde iyo wareegga xfce
Hagaag, haa, waan fahamsanahay inaysan gebi ahaanba ugu fiicnayn kooxaha leh ilaha xaddidan, haddii ay dhacdo taasi way fiicnaan lahayd in la rakibo sanduuq furan, fluxbox, e17, mandiil-qt, maareeyaha daaqadda sonkorta, in yar oo la xuso.
Hanuun aad ufiican, boosteejo aad ufiican.
Si aan ugu raaxeysto Fedora 17, waxaan ku cusbooneysiiyay preupgrade.
Waad ku mahadsantahay faallooyinka bro;).
Haye Perseus, waxaan ka soo dejiyey 17 been cd oo waxaan ku rakibey unebuttin, laakiin waa Ingiriis iyo waxba ma i siin ikhtiyaar iyo rakibida kde, waa ceeb sababtoo ah ma jecli qolofka gnome wax badan, maxaan sameeyaa ?
Taasi waa sababta oo ah waxaad u badan tahay inaad soo dejisay gnome Shell Live CD, LiveCDs kaliya waxay ka kooban tahay jawi desktop ah Gnome, KDE, Xfce ama Lxde. Soo dejiso midka la yimaada KDE, http://fedoraproject.org/es/get-fedora-options
LOL! Waad saxsan tahay, waa inay taasi sabab u tahay, xitaa sidaas darteed luuqadda ayaa i xiisaysa, mahadsanid waan soo dejinayaa, si kasta oo aan uga tagayo cusbooneysiinta si aan u arko waxa dhacaya, waxa hubaasha ah inaanan ku laabanayn Ubuntu!
kondur05 ee gnome wuxuu kujiraa Qaabeynta Nidaamka / Xulashada Luqadda, (Hotcorner adigana waxaad qortaa luqad)
Waxaad doorataa Isbaanish oo waxaad dhigtaa bilowga ka dibna Codsiga dhammaan badhanka. Wax fikrad ah kama haysto sida loogu sameeyo KDE.
Waxaan hayaa xiisaha xiisaha leh ee aan kuheli karo kde iyo gnome isla waqtigaas fedora?
Haa, dabcan, intabadan distros waxay taageeraan desktops-yada badankood ... ku raadi plasma, waxaan u maleynayaa inay tahay kde-plasma-desktop, kadib markaad rakibto waxaad ku xulaneysaa marinka isticmaalaha.
waad ku mahadsantahay ayurda lex, mudo kadib waan ansixin doonaa (xaaskeyga ayaa i weydiisatay inaan aado wax soo iibso adiguna waad ogtahay… .hehe).
Si aad u iibsato? : S Sifiican ayaan kuu fahmay… Markaa berri ayaan warqad isu qoraynaa.
Hagaag waan kahadlayaa si aan u soodajiyo kde ee gnome oo aan u soo dejiyo wareejinta fedora kde, runtiina waxaan la mid ahay kde, yaa f * ck .. gnome sida lagu sheegay Linux gaar ah ayaa hehehe. runta gnome waxay u muuqataa inay tahay waxyaabaha indhaha fardaha geliya si ay u arkaan dhinaca kale, maxaa yeelay wax aad u yar oo aad sameyn kartid ayaad ku ridi kartaa. saaxiib lex waad ku mahadsantahay caawimada
Waad salaaman tihiin, dhibaatooyin ayaa iga haysta rakibistooda HP Mini 110-3124la, maaddaama sida iska cad uusan lahayn aqrin CD / DVD, waa markayga USB-ga waana halka ay dhibaatadaydu ku jirto m usb waa 4GB, waana isku dayay. gudaha Pendrive Linux, Unetbootin iyo xitaa isla USB Fedora waxayna igu tuuraysaa khaladaad sida Fashilaada waqtiga rakibida waxayna ii sheegaysaa in Bootloaderku fashilmay oo uusan kabaha qaadi karin, iyo wixii horey ugu sii jiray sda, qalad kale taasi waxay i siineysaa in meelaha wax lagu keydiyo aysan aheyn markii la rabay inay DVD ku xirnaadaan waana inaan kala soo baxaa, url fikirkaas maleh ilaa iyo inta ay ka baxeyso, dhibaato kale oo i haysata ayaa ah xididka / ma sameyn karo xijaab aasaasi ah tan iyo markii ay sheegayso in aysan jirin meel ku filan, sida xiisaha leh iyo in ay u egtahay 20 GB oo ah boos banaan oo ku jira qaybta.
Kuwani waa dhibaatooyinka aan haysto, xalkoodu sida muuqata waa inaan gubaa DVD-ga oo aan ku rakibaa CD / DVD dibadda ah, laakiin ma haysto dhaqaale aan ku helo mid, mid aad uga yar amaahda, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado waxa kale xalalka aad isiin karto maadaama aan lumiyay maalin dhan iyo badh isku daygii aan ku rakibayay marwalbana isku xaalad, salaan iyo mahadsanid.
Jawaab Mario Hernández
Mario isla waxaas ayaa igu dhacay laakiin furitaan, runtiina waa aniga wax fikrad ah kama haysto, wax kale ayaa ah in fedora aysan dooneynin inay cusbooneysiiso 🙁
Waad salaaman tahay walaal, aad baad u mahadsan tahay, casharradu si aad ah ayaa loogu sharxay qaybta ay tahay inaad doorato ikhtiyaarka si aad u ogaato inay ku jirto diskka oo dhan ama qaybo ka mid ah, aad baad u mahadsan tahay
Aniga ayay igu dhacdaa in dhibaatadaadu ay noqon karto inaad leedahay awood yar oo ah pendrive marka loo eego cabirka sawirka iso DVD. Adiga oo wata 4 Gb pendrive waxaad ku rakibi kartaa sawirka CD iso oo qiyaastii ah 700 Mb.
Ku jawaab isidro
Haye, waan cusub ahay oo waxaan u baahanahay caawimaad sida loo rakibo barnaamij fedora 17, ama barnaamijyo gaar ah oo loogu talagalay Linux ama kuwa daaqadaha oo leh waad awoodaa laakiin waa inaad rakibtaa mid la yiraahdo khamri ama miime ama tay.
Waxaan rabaa inaan barto sida loo rakibo. waxaan rabaa inaan rakibo buug deg deg ah oo ah xisaabinta waxaanan rabaa inaan ku tijaabiyo fedora hadii ay shaqeyso.
oo waxaan isticmaali karaa daaqadaha 7 iyo Linux fedora. taas oo ah, marka aad bilaabeysid kumbuyuutarka, waxaad dooran kartaa midkood.
iyo haddii nooca Linux fedora ah 64 lagu taliyo iyo in kale. waxay yiraahdaan taas oo loogu talagalay iswaafajinta ama wadayaasha ama barnaamijyada
salaan iyo cashar aad ufiican. Way fiicnaan laheyd mowduucyada kale sida waxa aan weydiiyo sida loo rakibo barnaamijyada kala ah .ex ama windows, iyo kuwa loogu talagalay Linux.
Waxaan ku arkay qaar amarro ah vlc player, si aad u rakibto waa inaad ku nuqultaa TERMINAL $ kadibna aad siisaa eenter-ka waana taas?
Fadlan waxaan rabaa caawimaad. emailkeyga mcollado77@yahoo.com
salaan iyo guul ka gaadho hawl maalmeedkaaga
Su'aal, Ma runbaa in LiveDVD ay kuu oggolaaneyso inaad doorato Fedora daaqadda daaqadda aad rabto inaad rakibato?
Kumbuyuutarkaygu waa mid aad u… laakiin aad AAD ugu xaddidan ilaha dhaqaalaha, waxaana jeclaan lahaa inaan ku rakibo Fedora durba Fluxbox iyo XLDE
Waa hagaag waxaan khibrad xun u leeyahay rpm distros, laakiin cashar fiican ayaa u ah kuwa jecel fedora.
Waxaan kugula talin lahaa livecd ka badan, nooca DVD markaa badanaa si fiican looma tijaabiyo.
Waad salaaman tihiin asxaabta, dhibaato ayaa i haysata markaan rabo inaan rakibo ama daawado Fedora 17 live disk, sawir kuma helayo shaashadda.
Kaarka sawirada ee aan haysto waa Nvidia GTX-550Ti, kormeerkuna waa TV-ga LG, kahor, waqti dheer kahor intaanan laqaban fedora 7, oo waxaan kahelay mid aad u wanaagsan ... hadana waxaan rabaa inaan dib ugu noqdo oo aan xasuusto waxa Waan bartay waqtigaas. Taasi waa sababta aan kuu waydiisanayo caawimaad yar fadlan.
iskuday halbeegga nomodeset ee firirka
Waxaan ku rakibay desktop-ka Fedora 17 laptop 32-bit ah oo kaliya 512 wan oo wan ah iyo 1.6ghz iyo 64mb xD video ka waan ogahay inuu gaabis yahay laakiin waxay ii sheegeen in lagu qaban karo oo kaliya 700mb wan oo raxan ah iyo in kale aan ku rakibo laakiin waxaan ka qorayaa fedora waxayna si fiican ula shaqaysaa xoogaa dib u dhac ah markii la furayo barnaamijyada sidoo kale Firefox waxay qaadatay 10 ilbidhiqsi in la furo laakiin wali si fiican ayey ugu shaqaysaa laptop-ka oo wata 512mb wan
Waxaan hayaa 'su'aal yar oo malaha fudud;
Sideen ku heli karaa qaabeynta "Boot GRUB Menu". Waxaan ula jeedaa gidaarka hore, sanduuqa xulashooyinka iyo bar horumarka. Waxaan jeclaan lahaa in qaabeyntaas aan ku yeesho GRUB-kayga.
Ku jawaab Shonky
Saaxiibbo waad salaaman tihiin, waan daawanayay casharradan laakiin aniga ima shaqeynayo tan iyo markii aan soo degsaday feedo 18 KDES ah oo toos ah (Laga soo bilaabo garaafkayga nvidia waxay ii sheegeen in gnome uusan si fiican u socon doonin) mana aha isku tallaabooyin, Dhibaatadu waxay tahay inaan sameeyo rakibaadda iyo wax walba laakiin markaan dib u bilaabo kumbuyuutarkeyga GRUB ma jiro oo wuxuu ka bilaabmaa kaliya daaqadaha 7, waxaan isku dayay inaan gacanta geliyo cirifka gacanta laakiin cd-ga tooska ah iima tusiyo habka qunsuliyadda (xoogaa badbaadin ah sida laga soo xigtay Waxaan gali karaa oo keliya xarunta soo galitaanka tooska ah amarkuna aniga ima shaqeeyaan.
Waxaan cadaabta u dirayaa fedora iyo suse = / laakiin dib ayaan ugu noqonayaa ubuntu ama diro kale
wax caawimaad ah oo ku saabsan kiiskeyga ama hoosta qaabka DVD-ga ee fedora?
hello ... waa hagaag dhibaato ayaan ka qabay rakibaadda, waxaan ka dhigay qayb ka mid ah diskka momo tilmaamayo laakiin iima oggolaaneyso inaan sii wado, markaan dhigo «xiga» waxay ii sheegtaa: «ma aysan abuurin marxalad 1 bootloader ah aaladda bartilmaameedka »
Jawaab jorge luis
Qofna ma i caawin karaa fadlan
Jorge Luis, ma xallin kartaa dhibaatadaada? Hadday sidaas tahay, sidee ku xallisay? Farxad!
Hello Jorge Luis, ma awoodday inaad xalliso dhibaatadaada? Hadday sidaas tahay, sidee ku heshay? Farxad!
Sida loo Fedora: U cusbooneysii Nooca Cusub ee leh Preupgrade
Sida loo Fedora: Ku rakib Nvidia GeForce 6/7/8/9/200/300/400/500 Wadayaasha